I-china abenzi be-web abenziwe ngokwezifiso base-china, abahlinzeki, ifektri - i-Quotation - i-Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Ikhaya > Ukubamba izingosi > Impahla yewebhu > Ukwehliswa kwewebhu kwe-PP
1. Ukwethulwa komkhiqizo weUkwabiwa kwe-PP:
Ukufakwa kwewebhu kwe-PP izenziwe ngezinhlobonhlobo zezintambo njengezinto zokusetshenziswa zibe indwangu encane.Kunezinhlobonhlobo eziningi zendwangu yeribhoni ye-PP, esetshenziswa kakhulu kwezingubo, izicathulo, izikhwama, imboni, ezolimo, izimpahla zempi, ezokuthutha kanye neminye imikhakha yezimboni.Ngawo-1930, iribhoni yenziwe ngezandla ngomhlangano wokusebenzela, izinto zokusetshenziswa zontambo kakotini, intambo ye-hemp.Ngemuva kokusungulwa kweNew China, iribhoni enezinto zokusetshenziswa yathuthukiswa kancane kancane yaba yinayiloni, i-vinylon, i-polyester, i-polypropylene, i-spandex, i-viscose, ukwakha ukunitha, ukunitha, ukunitha imikhakha emithathu yobuchwepheshe, ukwakheka kwendwangu kune-weave elula, i-twill, i-satin, i-jacquard, ungqimba ophindwe kabili, ungqimba oluningi, inhlangano eyi-tubular nehlangene.
2. Amapharamitha womkhiqizo weUkwehliswa kwewebhu kwe-PP:
Inayiloni, i-Polyester, i-PP, Ukotini
Kwenziwe ngentando noma iphethini yethu ngomumo
Imibala ehlukene iyatholakala
Eco-Friendly, AZO mahhala, ukuphikelela okuphezulu
Ingubo, Izindwangu Zasekhaya, Izicathulo nezikhwama
Isampula yamahhala iyatholakala
Amamitha ayi-100000 ngesonto
Cishe izinsuku eziyi-7 - 10
I-EXW, i-FOB ne-CIF
Umoya, uLwandle, i-Express (umnyango nomnyango wokuthumela i-DHL EMS FEDEX UPS)
Iroli ngayinye ku-polybag, ngaphandle ibhokisi lokuthekelisa, noma ngokuya ngesicelo sakho.
3.Yini amakhasimende ayinakekelayot
4. Imiyalo yokusebenzisa umkhiqizo weUkwehliswa kwewebhu kwe-PP:
5. Ukupakisha nokuhamba
Izinzuzo zomkhiqizo we-Ukwehliswa kwewebhu kwe-PP:
Heat ukumelana:i-polyester yenziwa ngokuncibilika kokuphotha. I-fiber eyakhiwe ingancibilika ngokushisa futhi. It kungokwalabo fibre thermoplastic.Iphoyinti lokuncibilika le-polyester liphakeme kakhulu, futhi umthamo wokushisa othize nokuqhuba okushisayo kuncane, ngakho-ke ukumelana nokushisa nokufakwa okushisayo kwe-polyester fiber kuphakeme.Ingenye yezintambo zokwenziwa ezinhle kakhulu.
Amandla aphezulu: amandla amafushane we-fiber we-2.6 ~ 5.7cN / dtex, amandla aphezulu we-fiber we-5.6 ~ 8.0cN / dtex.Ngenxa ye-hygroscopicity yayo ephansi, amandla ombuso wayo omanzi namandla omumo wesimo ngokufanayo ngokufanayo.Amandla we-Impact aphakeme izikhathi ezine kuneyiloni, izikhathi eziphakeme ezingama-20 kune-viscose fiber.
I-Hygroscopicity ayimpofu: kulula ukoma, futhi cishe akukho ukwehla kokuqina komswakama, akukho ukusonteka.
Q1.Ingabe uyinkampani yefektri noma yokuhweba?
Singumkhiqizi wangempela wazo zonke izinhlobo zokugaya imichilo. Sinefektri yethu eQingdao.
Q2.Iyini imikhiqizo yakho eyinhloko?
Sakha futhi sikhiqize izembatho ezahlukahlukene zezingubo:
- Ama-band Elastic elastic & nokunwebeka kweButtonhole nokunwebeka
- Ama-Woven Elastic bands & i-Jacquard yangaphansi yangaphansi nokunwebeka & Amabhande we-Twill Elastic
- Songa phezu nokunwebeka & phrinta & jacquard
- Ukunwebeka kwesikhumba
- Amabhendi e-Elastic nonlic Slip Silicone Printed Elastic
- Amateyipu we-Herringbone webbing & amabhande we-Twill webbing
- Izintambo ezi-Flat nezindilinga, izintambo zikakotini neze-polyester, izintambo ezinwebeka nxazonke
- I-Polyester webbing ne-nylon webbing
1. Uma ngesampula lesitoko, amasampula amahhala futhi udinga nje ukukhokha imali yokuposa. Noma ungahlinzeka nge-akhawunti yakho yekhuriya kithi.
2. Uma ufuna isampula yokuklama ngokwezifiso, udinga ukukhokhela isampula yokwenza izindleko.
Q4.How eside Ngingathola isampula kuwe?
1.For stock isampula, singakwazi ukuthumela ngokushesha.
2.If ngokwezifiso isampula design, kuzothatha izinsuku 7-10 ukwenza, bese uzothumela kini.
Q5.Yini i-MOQ yakho? Ngingakwazi uku-oda inani elincane le-oda lokuqala?
I-MOQ yethu ingamamitha ayi-3000 ngosayizi ngamunye nombala ngamunye. Futhi singalamukela i-oda le-samll, kepha kuzokhokhiswa ezinye izindleko ezingeziwe.
Q6.siphi isikhathi sakho sokukhiqiza se-oda eliningi? (Thatha amamitha we-MOQ 3000 ngokwesibonelo)
Ngokuvamile, kuzothatha izinsuku eziyi-10-15 ukukhiqizwa.
Umbuzo 7. Izothunyelwa kanjani izimpahla e-US?
I-1.For isampula ne-qantity encane, izimpahla zizothunyelwa yizithunywa zomhlaba wonke ezifana ne-DHL, UPS, FEDEX, TNT njalonjalo.
2. Ngokwe-qantity enkulu, izimpahla zizolethwa ngolwandle, ngendiza noma nge-couirer yomhlaba.
3. Singakwazi futhi ukukwenza ngokuya ngezidingo zakho.